मौसम परिवर्तनले हाम्रो समुद्रलाई के गरिरहेको छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तनले हाम्रो समुद्रलाई के गरिरहेको छ?
हामीले अन्य अवसरहरूमा भनेझैं जलवायु परिवर्तनले ग्रहको प्रत्येक कुनामा असर गर्छ। र निस्सन्देह, यो समुद्र र सागरहरूमा कम हुने थिएन। यसको विनाशकारी प्रभावहरु ग्रह को सबै समुद्रहरु मा जीवित अवस्था परिवर्तन गर्दैछ।
अहिलेको लागी, समुद्रमा जीवनको अवस्थामा सबैभन्दा बढी परिवर्तन ल्याउने प्रभाव सतहको पानीमा तापक्रम बढेको हो। मौसम परिवर्तनले हाम्रो समुद्रलाई के गरिरहेको छ?
1 समुद्री तापमानमा वृद्धि
2 समुद्रमा मौसम परिवर्तनको बारेमा एक अध्ययन
3 समुद्रमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
समुद्री तापमानमा वृद्धि
सतह पानीको तापमान बढ्दो छ र यसको साथ, फायटोप्लांकटन, जुन समुद्रमा फूड चेनका लागि सबै खाद्यहरूको आधार हो, घट्दै छ। मौसम परिवर्तन र तापक्रम परिवर्तनले समुद्री प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउँछ।
समुद्रको धारमा भएको परिवर्तनले कसरी प्रजातिलाई असर गर्न सक्छ? यो धेरै सरल छ, फाइटोप्लांकटन माइक्रोस्कोपिक बोटबिरुवाले बनेको हुन्छ जुन खिलिन्छ र पानीमा भेट्टाउँछ। जसरी धारा र तिनीहरूको प्रचलनको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ, धेरै प्रजातिको खाना जुन उनीहरूलाई सँभाल्छ उसले स्थान परिवर्तन गर्दछ। यस प्रकारले, यसले प्रजातिहरूलाई बास दिन्छ र उनीहरूको बासस्थान परिवर्तन गर्न को लागी, अन्य प्रकारका घातक शिकारीहरूको सामना गर्ने जोखिम चलाउँदै र नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई अनुकूल बनाउन बाध्य पार्छ।
यी सबैले समुद्री इकोसिस्टममा बढी नकारात्मक असर पार्दछ र धेरै प्रजातिहरूको अस्तित्वको सम्भावनालाई कम गर्दछ।
समुद्रमा मौसम परिवर्तनको बारेमा एक अध्ययन
एउटा अध्ययनले यस ग्रहका छवटा प्रमुख क्षेत्रहरू पत्ता लगाएको छ जुन समुद्रमा जीवन निरन्तर रहिरहन्छ भने सुरक्षा गर्नुपर्नेछ। यो अध्ययन अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र स्पेनिश अनुसन्धानकर्ताहरु द्वारा आयोजित गरिएको छ। इकोसिस्टमका विशेषताहरू र कसरी जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई असर गर्दछ भनेर जाँच्नको लागि, तिनीहरूले विगत years० बर्षमा संकलित उपग्रहहरूको नक्षत्रबाट डाटा प्रयोग गरेका छन् कि कसरी जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण ग्रहको समुद्रलाई असर गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन।
टेक्नोलोजीको विकासका लागि धन्यबाद, कसरी जलवायु परिवर्तनले विश्वभरिका समुद्रहरूलाई असर गर्छ भन्ने छविहरू प्राप्त गर्न सम्भव भएको छ ग्राफिक रिजोलुसनमा अहिले सम्म पुग्न सकेन। यद्यपि आधारभूत भौतिकशास्त्रले भन्छ कि तरल माध्यमको अवस्था सबै ठाउँमा उस्तै हुन्छ, समुद्रको विशालतामा यस्तो हुँदैन। यस कारणले गर्दा, ग्लोबल वार्मिंग सबै पानीमा एक समान हुँदैन र यो अक्षांशको सवाल मात्र होइन।
समुद्रमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
मौसम परिवर्तनले समुद्रमा प्रभाव पार्दै आएको प्रभावहरू, वा कम्तिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय र तत्काल, यी हुन्:
सतह पानीको तापक्रम
बोटहरूमा क्लोरोफिल उत्पादन घटेको छ
समुद्री प्रवाहको बान्कीमा परिवर्तनहरू
अध्ययन मा प्रकाशित गरिएको छ विज्ञान उन्नति, र दुई विरोधी प्रवृत्ति देखाउँदछ। एकातिर, गत शताब्दीको १ 80 s० को दशकदेखि सतहको पानीको तापक्रम बढ्न बन्द भएको छैन। अर्कोतर्फ, प्रति घन मिटर क्लोरोफिलको एकाग्रता तबदेखि घट्न रोकेको छैन। यो कामले तेस्रो चरलाई पनि नाप्यो: समुद्री प्रवाहहरू, जुन ग्रह भर तातो वितरणका लागि जिम्मेवार हुन्छन् र वायुमंडलीय आन्दोलनको साथ संयोजनको रूपमा पनि मौसम विज्ञानको। यद्यपि ठूलो विषमता छ, सामान्यतया यी समुद्री नदीहरू सुस्त हुँदै गइरहेका छन्।
यी सबै कारकहरूका संयोजनहरू कसरी वैज्ञानिकहरूले प्रत्येक क्षेत्रमा निर्दिष्ट गर्न सक्षम भएका छन् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा नाप्न सक्षम भएका छन्। ध्रुवीय क्षेत्र ती हुन् जुन उनीहरूको पानीको तापक्रममा अधिक सापेक्ष बृद्धि भईरहेका छन् र यो त्यहि हो जब पिघलबाट ताजा पानी कार्यमा आउँदछ, यसले समुद्री प्रवाहहरूलाई बेवास्ता गर्दछ। जैव विविधताका हिसाबले, दुबै उत्तरी एटलान्टिक र उत्तरी प्रशान्त महासागरले एक तापक्रमको अनुभव गरिरहेको छ जसको समुद्री जैव विविधतामा पार्ने प्रभाव अझ निश्चित भएको छैन।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जलवायु परिवर्तनले ग्रहको सबै कुनालाई असर गरिरहेको छ र यसको जति धेरै अध्ययन गरिएको छ, त्यहाँ त्यति बढी जागरूकता छ कि यसले प्रभाव वास्तविक छ र बढ्दो रोक्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनले हाम्रो समुद्रलाई के गरिरहेको छ?
मारिया डे लॉस एंजेलिस Quesada रिवेरा भन्यो
यो आश्चर्यजनक छ के यती धेरै वातावरणीय आक्रमणको साथ संसारको अन्त भइरहेको छ
मारिया डे लस एन्जलस Quesada Rivera लाई जवाफ दिनुहोस्
मौसम परिवर्तनले टेरूएलमा कालो पाइनलाई खतरामा पार्दछ
मौसम परिवर्तनले प्राकृतिक चयनमा परिवर्तन गर्न सक्दछ